စွဲ - သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ရောဂါ (၂၀၀၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
မှတ်ချက်များ - ၎င်းသည်သုတေသနဆောင်းပါးအများစုထက်နည်းပညာပိုင်းအရရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲမက်ဖွယ်ရာများနှင့်လိုအင်ဆန္ဒများကိုအစားထိုးလိုက်သောစွဲလမ်းမှုအကြောင်းကိုလွန်ကဲစွာသင်ယူခြင်းဟုဖော်ပြသည်။
စတီဗင်အီး Hyman, MD နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 162: 1414-1422, သြဂုတ်လ 2005
neurobiology မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အောင်မြင်သောကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်လျှင်, သုတေသီများသောမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေ compulsive အသုံးပြုမှုသို့စုစည်းနေကြသောမော်လီကျူးယန္တရားများ, relapse အန္တရာယ်၏ရှည်လျားသောဇွဲအခြေခံသောယန္တယားများနှင့်ယန္တရားများရှာဖွေတွေ့ရှိရမယ် မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ထံသို့လာကြ၏။ ယင်းမော်လီကျူး, ဆယ်လူလာ, စနစ်များမှာသက်သေအထောက်အထား, အမူအကျင့်များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ကွန်ပျူတာအဆင့်ဆင့်စွဲ၏လိုက်စားရန်နှင့်ဆက်စပ်သောရှင်သန်မှုအပြုအမူတွေကိုပုံဖော်ဖို့အစေခံသာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်ကြောင်းသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အာရုံကြောယန္တရားများတစ်ဦးရောဂါဗေဒလုကိုကိုယ်စားပြုသောအမြင်အကြံပြုဖို့ဆုံဖြစ်ပါတယ် ဆုလာဘ်များနှင့်၎င်းတို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသောတွေကို။ စာရေးသူကဤဒေသရှိအတွက်စုဆုံသက်သေအထောက်အထားအကျဉ်းချုပ်နှင့်ကျန်ကြွင်းသောသော့ချက်မေးခွန်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြ
စွဲအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဖြစ်လာသည့်စွဲလူတစ်ဦး၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဘဝအခန်းကဏ္ဍအတွက်ပျက်ကွက်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်း, ထောင်ချခြင်း၏အန္တရာယ်နှင့်အခြားပြဿနာများကိုရှိနေသော်လည်း, ရယူသုံးပြီးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကျဉ်း။ စွဲလမ်း၏အရေးပါသောဝိသေသက၎င်း၏ခေါင်းမာဇွဲဖြစ်ပါသည် (1, 2)။ အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှစ်ဦးစလုံးမျိုးရိုးဗီဇနှင့် nongenetic အချက်များအားဖြင့်အားနည်းချက်ပြန်ဆိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဆေးရွက်ကြီး, အရက်, ဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး compulsive အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ပေးနိုငျပမေဲ့ (3-5), စွဲလမ်းတစ် recalcitrant, နာတာရှည်နှင့် relapsing အခွအေနေဖြစ်ထေူ (2)။ စွဲလမ်း၏ကုသမှုထဲမှာအလယ်ပိုင်းပြဿနာသည်နောက်ဆုံးဆုတ်ခွာလက္ခဏာကုန်သည်မပြီးပင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမူးယစ်အခမဲ့ကာလပြီးနောက်, ကောင်းစွာမကြာခဏမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုအားဖြင့် precipitated relapse များ၏အန္တရာယ်, အလွန်မြင့်မားဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် (6, 7)။ ဒီအမှုမရုပ်သိမ်းလက္ခဏာတွေအနာဂတ်အပြုအမူအကြောင်းကိုပဲ့သတိပေးထုတ်ပေးရန်, သူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကအငြိမ့်ခဲ့ကြ, ထိုသို့ပြုတော်မူပြီးမှသည်အထိ, ကုသမှုရိုးရှင်းစွာအကာအကွယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကွာစွဲလူတွေကသော့ခတ်ထားရှိရေးနိုင်ဘူး။
မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမကြာခဏမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများအဖြစ်စဉ်းစားပေမယ့်ဦးနှောက်ကိုသိပ်အောက်မေ့သို့မဟုတ်လွန်းအားကောင်းရောဂါဗေဒအသင်းအဖွဲ့များမှတ်တမ်းတင်ဘယ်သို့လျှင်လဲ? ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက်လာမှုနဲ့ (8) စွဲလူမျိုး၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ရှည်လများလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီကြောင်းစွဲလမ်းတဲ့ "ရောဂါဗေဒသင်ယူမှု" မော်ဒယ်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအမှုကြပြီ (6)။ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်ပိုပြီးမကြာသေးမီကွန်ပျူတာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အတူဤလုပ်ငန်းကို, (9, 10)မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုသူတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးပါဝါမှီမယ်သောယန္တရားများအကြံပြုထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ပုံမှန်ပုံစံများများ၏လုပ်ရပ်များအကြားတူညီထင်ရှားပါပြီ (11-14)ဘယ်လိုမှတ်ဉာဏ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအသိပညာ encoding ဖြစ်ပါတယ်သောအသိပေးချက်နှင့်အတူ (15) ထိုသို့ဆက်ရှိနေသေးဘယ်လို (15, 16) မည်သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမှတ်ဉာဏ်စနစ်အတွက်ဝေးပြီးပြည့်စုံကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ငါစွဲဆုလာဘ်များနှင့်၎င်းတို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသောတွေကိုများ၏လိုက်စားရန်နှင့်ဆက်စပ်သောရှင်သန်မှုအပြုအမူတွေကိုပုံဖော်ဖို့အစေခံသာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်ကြောင်းသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အာရုံကြောယန္တရားများတစ်ဦးရောဂါဗေဒလုကိုယ်စားပြုငြင်း (11, 17-20).
ဆုလာဘ်များ၏ကြိုးပမ်းရန် Related ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်၏တစ်ဦးက Hijacking လုပ်ခြင်း
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မျိုးစိတ်ရှင်သန်မှုသည်သက်ရှိများသည်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များ (ဥပမာ - အစားအစာနှင့်အမိုးအကာ) ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စွန့်စားမှုများကြားမှမိတ်လိုက်ခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများလိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရှင်သန်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သဘာဝပန်းတိုင်များသည်“ ဆုလာဘ်များ” အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏စားသုံးမှု (သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်း) သည်လိုချင်သောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သူတို့နောက်သို့လိုက်ကြသည်။ အကျိုးရှိသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်အပြုအမူများသည်နိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြင်းထန်စွာဆက်လက်တည်ရှိနေသည် (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်မှုများဖြစ်သည်) (21)။ ထိုကဲ့သို့သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, ရေငတ်ခြင်း, လိင်စိတ်နိုးထအဖြစ် internal စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များ, ရည်မှန်းချက်-related တွေကို၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်၏သူတို့ကိုယ်သူတို့ objects နှင့်လည်းစားသုံးမှု၏အပျြောအပါးတိုးမြှင့် (တဦးတည်းဆာလောင်မွတ်သိပ်အခါဥပမာ, အစားအစာပိုကောင်းအရသာ) (22)။ ထိုကဲ့သို့သောသူတို့မျက်မှောက်သို့မဟုတ်အနံ့အစားအစာသို့မဟုတ် estrous အမျိုးသမီး၏အနံ့အဖြစ်ဆုလာဘ် (မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု), နှင့်ဆက်စပ်သောပြင်ပတွေကိုထိုကဲ့သို့သောအဘို့အ foraging သို့မဟုတ်အမဲအဖြစ်ရှုပ်ထွေးပြီးမကြာခဏခက်ခဲအပြုအမူပာသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်, စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များအစပျိုးသို့မဟုတ်ခိုင်ခံ့စေနိုင်ပါတယ် အစားအစာ, ပင်အတားအဆီး၏မျက်နှာကိုအတွက်အောင်မြင်တဲ့နိဂုံးချုပ်ဖို့ယူဆောင်ပါလိမ့်မည်။ တပ်မက်လိုချင်သောဆုလာဘ် (ဥပမာအမဲလိုက်သို့မဟုတ် forage တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပာ) ရယူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါအမူအကျင့်ပာ overlearned ဖြစ်လာသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အရေးယူပာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတစ်ဦးအားကစားသမားအဖြစ်အများကြီးသူတို့နေဆဲအများအပြားပေါ်ဖြစ်ပေါ်တုံ့ပြန်ရန်လုံလောက်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အော်တိုကားသောအချက်မှလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သိလာကြတယ်။ ထိုသို့သော prepotent, Automatic အမူအကျင့် repertoire ဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအားဖြင့်လည်း activated နိုင်ပါသည် (19, 23).
မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆက်နွယ်အပြုအမူများ၏ပုံစံများအားလုံးနီးပါးသည်အခြားရည်မှန်းချက်များ supplant ၎င်းတို့၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်ပေမယ့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ, သဘာဝဆုလာဘ်များကရူးနှမ်းသူတို့၏အမျိုးအဆင်တူအပြုအမူပုံစံများထုတ်ယူ။ သဘာဝကဆုလာဘ်ကဲ့သို့ပင်မူးယစ်ဆေးအပြုသဘောရလာဒ်ကို (အန္တရာယ်အဖြစ်မှန်သျောလညျး) ၏မျှော်လင့်အတွက်အလွန်ရှာဖွေကြသည်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီစွဲလမ်းသို့နက်ရှိုင်းကရြောကျအဖြစ်, မူးယစ်ဆေးဝါးရှာကဥပဒေကိုလိုက်နာတစ်ဦးချင်းစီပြစ်မှုများကျူးလွန်ရန်ယခင်က, လျစ်လျူရှုကလေးများမိဘများကလှုံ့ဆျောနိုငျကွောငျးထိုကဲ့သို့သောအာဏာယူ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်စောင့်ရှောက်ဖို့နာကျင် alcohol- သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီး-related ရောဂါနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ (24)။ ထပ်တလဲလဲမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်အတူအရက်နှင့် opioids ၏အမှု၌မူးယစ်ဆေးရပ်နားခြင်းနှင့်အတူဆုတ်ခွာ syndrome ဒုက္ခခံစားခဲ့ရဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်မှီခိုထုတ်လုပ်ကြောင်း homeostatic adapter, လာပါတယ်။ ရုပ်သိမ်းရေး, အထူးသဖြင့်ထိခိုက်စေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းဖို့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ် (25) ဤသို့ဆာလောင်ခြင်းမှ analogized နိုင်ပါသည်။ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲမူးယစ်ဆေးဝါးများရယူပေးဖို့မက်လုံးပေးတိုးပွါးပေမယ့် (26), မှီခိုနှင့်ဆုတ်ခွာစွဲရှင်းပြကြဘူး (7, 19)။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များများတွင်မူးယစ်ဆေးရပ်နားခြင်းပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေး reinstatement ပိုပြီးအစွမ်းထက်ဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်ထက်မူးယစ်ဆေးမှ reexposure အားဖြင့်လှုံ့ဆော်နေသည် (27)။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီးသိသိသာသာ, မှီခိုနှင့်ဆုတ်ခွာရှည်လျား detoxification ပြီးနောက် relapse အန္တရာယ်များ၏ဝိသေသဇွဲရှင်းပြလို့မရဘူး (6, 7, 19).
detoxification ပြီးနောက် Relapse မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်လူများ, နေရာများ, paraphernalia, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ထင်ရှားခံစားချက်တွေကိုအဖြစ်တွေကိုက precipitated ဖြစ်ပါတယ် (6, 7) လည်းစိတ်ဖိစီးမှုများက (28)။ ထိုကဲ့သို့သော cortisol အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုရှိသည်, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုရှယ်ယာ dopamine များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်စွမ်းမှတ်သားဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည် (28) နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံအပေါ် excitatory synapses ၏ခွန်အားတိုးပွားစေဖို့ (29)။ တွေကိုမူးယစ်ဆေးလိုကိုသက်ဝင် (11, 30)မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ (19, 31)နှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု။ မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုအားဖြင့် activated အဆိုပါမူးယစ်ဆေး-ရှာ / forage repertoire အစစ်အမှန်လောကရှိအောင်မြင်ဖို့ရန်လုံလောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ရပါမည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အကျိုးရှိစွာဖြစ်ရကြမည်ဆိုပါကတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့တစ်တွေသိသိသာသာ overlearned နဲ့ automatic အရည်အသွေးကိုရှိရမည် (19, 23, 31)။ အမှန်စင်စစ်အလိုအလျှောက်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏ cue-မှီခို activation relapse အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆထားသည် (18, 19, 23).
ပုဂ္ဂလဒိဋ္မူးယစ်ဆေးတဏှာမူးယစ်ဆေးလို၏သတိကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်၏ ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရမ္မက်သာမှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မူးယစ်ဆေးဝါးများအလွယ်တကူရရှိနိုင်မဟုတျပါလျှင်ဒါမှမဟုတ်စွဲလူတစ်ဦးကိုအသုံးပြုခြင်းကန့်သတ်ရန်ကြိုးပမ်းအောင်ပြုလုပ်လျှင်တွေ့ကြုံစေခြင်းငှါ (19, 23, 31)။ ဒါဟာဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, stimulus-ဘောင်းရန်, ဖွင့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္မူးယစ်ဆေးတဏှာရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်အကြီးအကျယ်အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များ, မူးယစ်ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေအတွက်ဗဟိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍ (32)။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဦးချင်းစီသတိရှိရှိနောက်တဖန်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှဖြေရှင်းပင်စဉ်ရှာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမူးယစ်ဆေးဝါးများလိမ့်မည်။
ဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး (33, 34) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်တွေကို (35-37) မူးယစ်ဆေးရမ္မက်နှင့်ထိုသို့သောစာနာနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ activation အဖြစ်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ပြသခဲ့ကြသည်။ အပြည့်အဝသဘောတူပေါ်ထွက်လာဖို့မရှိသေးပါသော်လည်း, အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများယေဘုယျအား amygdala, anterior cingulate, Orbital prefrontal နှင့် dorsolateral prefrontal cortex အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုနှင့်နျူကလိယ accumbens တုံ့ပြန် Active အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
အဆိုပါ Dopamine Hypothesis
pharmacological, တွေ့ရှိရပါသည်, Transgene နှင့် microdialysis လေ့လာမှုများအပါအဝင်အလုပ်၏တစ်ဦးကကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများနျူကလီးယပ် accumbens အပေါ် midbrain ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron ဖွငျ့ synapses အတွက် dopamine တိုးမြှင့်ဖို့ဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ်မူတည်ကြောင်းထူထောင်ထားပါတယ် (38-40)ယင်းနျူကလိယ shell ကိုဒေသ accumbens အထူးသဖြင့်အတွင်း, အ ventral striatum ယူထားသောအရာ (41)။ ထိုကဲ့သို့သော prefrontal cortex နဲ့ amygdala ကဲ့သို့သောအခြား forebrain ဒေသများသို့ Ventral tegmental ဧရိယာ dopamine စီမံချက်များလည်းမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေကိုပုံဖော်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ (42).
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများ circuit ကို accumbens, ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့ယန္တရားများ (ဥပမာအားဖြင့်ကိုးကားကြည့်ရှု, ကွဲပြားခြားနားဓာတုမိသားစုများကိုကိုယ်စားပြုလှုံ့ဆော်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောကနဦးမော်လီကျူးပစ်မှတ်ပိတ်ဆို့လျက်, ventral tegmental ဧရိယာ / နျူကလိယအပြင်ဘက်အများအပြားသက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ရပ်များရှိ 43, 44)ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နောက်ဆုံးမှာနျူကလိယ accumbens အတွင်း Synaptic dopamine တိုးမြှင့်။ ၎င်း၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍနေသော်လည်း dopamine အားလုံးစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး, အထူးသဖြင့် opioids များအတွက်မြေတပြင်လုံးပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူး။ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စေတဲ့အပြင်, opioids ဆုလာဘ်ထုတ်လုပ်ရန် accumbens သည့်နျူကလိယတွင်တိုက်ရိုက်ပြုမူစေခြင်းငှါ, norepinephrine အဖြစ်ကောင်းစွာ opioids ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါ (45).
မကြာမီကပု, အမူအကျင့်ဇီဝကမ္မ, ကွန်ပျူတာနှင့်မော်လီကျူးအဆင့်ဆင့်မှာအလုပ်နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသောယန္တရားများ elucidate မှစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်, prefrontal cortex နှင့်အခြား forebrain အဆောက်အဦများမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေကျော်ထိန်းချုပ်ဖို့ရာမှာအမှတ်ယူပြီးမူးယစ်ဆေးများအတွက်မက်လုံးပေးခြီးမွှောစေခြင်းငှါ, ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှစ်ခုအရေးကြီးသောအတွက်အသိပေးချက်ကြောင့်အဲဒီလိုစွဲသကဲ့သို့စွဲလမ်းမရှိတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အပြည့်အဝလူ့ syndrome ရောဂါမျိုးပွားနိုင်ပြီကြောင့်ရှုပ်ထွေးတဲ့လူ့အခြေအနေများပုံမှန်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များကနေလေ့လာသင်ယူသောအရာကိုချဲ့ထွင်ဖို့အမြဲသစ္စာပျက်ကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါကနောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်းများစွာစွဲ၏ pathogenesis စုံစမ်းစစ်ဆေးအတွက်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုဆောင်ခဲ့ပြီဟုဆိုသည်။
Dopamine လှုပ်ရှားမှု: အဆိုပါဆုကြေးဘီဘာအို-မှားယွင်းနေသည် Hypothesis
နျူကလီးယပ် accumbens ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာကနေ dopamine စီမံချက်များဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ၏သော့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤသည် circuitry ဦးနှောက်များကမတူကွဲပြားသောဆုလာဘ်၏အဘိုးပြတ်တစ်ဘုံငွေကြေးထောက်ပံ့ (21, 46)။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ / နျူကလိယ circuit ကို accumbens အတွင်းမှာပဲ dopamine ကြိုးဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်မိတ်လိုက်ဘို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ကသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်; အလားတူ, dopamine ဆုလာဘ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖို့စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဘို့လိုအပ်ပါသည် (22, 39, 40, 47)။ သဘာဝကရည်မှန်းချက်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်တ္ထု, အစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအကြားအထင်ရှားဆုံးခြားနားချက်အဆုံးစွန်တဲ့ဇီဝဗေဒလိုအပ်ချက်အစေခံရန်မအခ်ါနိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံးဟာနျူကလိယ accumbens နှင့်အခြား forebrain အဆောက်အဦများအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကသဘာဝဆုလာဘ်၏သက်ရောက်မှုတူတဲ့နှင့်အရှင်အပြုအမူပုံဖော်နိုင်ပါတယ် (9, 22, 23)။ အမှန်စင်စစ်သူတို့က dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ပိုပြီးကြာရှည်ဆွ၏ဝေး သာ. ကြီးအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သောအတွက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအများဆုံးကသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုကျော်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ရှိသည်သောတွေးဆခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုသတင်းအချက်အလက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့် encoded သလဲ? dopamine function ကိုတစ်ဦးအစောပိုင်းအမြင်တွေ့ရှိရပါသည်, တက hedonic signal ကို (အချက်ပြအပျော်အပါး) အဖွစျဆောငျရှကျခဲ့ပေမယ့်ဒီအမြင် pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့ခေါ်တော်မူပြီခဲ့ (48)နှင့်မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများ (49) dopamine ပျောက်ကွယ်သွားသော်ငြားလည်း sucrose ကဲ့သို့သောဆုလာဘ်များသည်တိရိစ္ဆာန်များအား ဆက်လက်၍ ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ထို့အပြင်နီကိုတင်း၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်ဤအကောင့်တွင်လျှို့ဝှက်နက်နဲသည့်အရာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်နီကိုတင်းသည်စွဲလမ်းမှုအလွန်ပြင်းထန်ပြီး dopamine ကိုထုတ်လွှတ်စေသည်။
အစား hedonic signal ကိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်၏, dopamine, အရှင်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်-related အပြုအမူပုံဖော်, အလိုရှိကြသည်နှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဦးရည်မှန်းချက်၏ hedonic ဂုဏ်သတ္တိများ binding, ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသော (48)။ တပ်လှန့်မျောက်, Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှအသံသွင်းပါဝင်သောစမ်းသပ်ချက်၏အရေးပါသောစီးရီးအတွက် (8, 50-52) midbrain dopamine အာရုံခံဆုလာဘ်စပ်လျဉ်းပစ်ခတ်ရာအောကျခွအေနမြေားစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက် dopamine သွင်းအားစုနှင့် ပတ်သက်. သော်လည်းမကွဲပြားသည့်နျူကလိယ accumbens အပေါ် dopamine အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ, dorsal striatum, amygdala နှင့် prefrontal cortex နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးသောယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ပေး။ Schultz et al ။ မျောက်မျှော်လင့်သို့မဟုတ်ချိုမြိန်အသီးဖျော်ရည်ကိုလောင်နေချိန်မှာ dopamine အာရုံခံထံမှအသံသွင်းလုပ်, တစ်ကြိုးနှိုးဆွ။ မျောက်ဟာအမြင်အာရုံသို့မဟုတ်အာရုံ cue အောက်ပါသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြီးနောက်ဖျော်ရည်ကိုမျှော်လင့်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မျောက်ဆုလာဘ်ဖြစ်ပေါ်ရာအောကျခွအေနမြေားသင်ယူအဖြစ်အဘယျသို့ပေါ်ထွက်လာ dopamine အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်တစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ခဲ့သည်။ နိုးမျောက်ခုနှစ်, dopamine အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်တစ်အတော်လေးကိုက်ညီ Basal (လုပ်သူများ) ပုံစံပြ; ဒီ Basal ပုံစံအပေါ် superimposed ဆုလာဘ်နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်၏ကြိုတင်အတှေ့အကွုံကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကိုက်သောဆူးလှုပ်ရှားမှု၏အကျဉ်း phasic ပြီးတော့ Activision နေတာဖြစ်ကြသည်။ အထူးအနေနဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ် (သီးဖျော်ရည်၏ပေးပို့) ပစ်ခတ်ရန်အတွက်ယာယီတိုးထုတ်လုပ်ပေမယ့်မျောက်အချို့အချက်ပြမှုများ (ကသေံသို့မဟုတ်အလင်း) ဒီဆုလာဘ်, ဒီ phasic လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများကို၏အချိန်ကိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသိသွားတယ်အဖြစ်။ အဆိုပါ dopamine အာရုံခံမဟုတ်တော့သီးဖျော်ရည်၏ပေးပို့တုံ့ပြန်တစ် phasic ပေါကျကှဲပြပေမယ့်သူတို့ကကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်နှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန်, ဒါကြောင့်အစောပိုင်းလုပ်ပါ။ တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းတင်ပြထားပါသည်ပေမယ့်ဆုလာဘ်ဆီးအတားလျှင်, ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အချိန်တွင် dopamine အာရုံခံ၏လုပ်သူများပစ်ခတ်ရန်အတွက်ခေတ္တနားလည်းမရှိ။ အကျိုးကိုမမျှော်လင့်တဲ့အချိန်ကလာသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ထားထက်ကျော်လွန်လျှင်မတူဘဲ, ပစ်ခတ်ရန်အတွက်ပြင်းစွာတိုက်တစ်ဦး phasic လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ ဤ phasic ပြီးတော့ Activision နေတာနှင့်ခဏလေးနားထားတာကခန့်မှန်း-အမှား signal ကိုဝှက်ကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်။ လုပ်သူများလှုပ်ရှားမှုမျှော်လင့်ခြင်းမှမပါသွေဖည်အချက်ပြလိုက်ခြင်း, ဒါပေမယ့် phasic ပြီးတော့ Activision နေတာဆုလာဘ်ပေးပို့၏ချုပ်ဖော်ပြသမိုင်းပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအပြုသဘောဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား (မျှော်မှန်းသည်ထက်ပိုကောင်းတဲ့) အချက်ပြခြင်း, ခဏလေးနားထားတာကအနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှား (မျှော်မှန်းသည်ထက်ပိုမိုဆိုးရွား) အချက်ပြ (9, 53)။ များစွာသောအခြားလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်းဤလိုအပ်သည့်စမ်းသပ်မှုများ၏တွေ့ရှိချက်များကိုအခြားဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်အပြည့်အဝပုံတူကူးယူခြင်းမပြုရသေးသကဲ့သို့၎င်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုများအတွက်ဖျော်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးစွဲခြင်းသည်လက်တွေ့ကျနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများထက်အပိုဆောင်းအားသာချက်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ သူတို့၏တိုက်ရိုက်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များကြောင့်စားသုံးမှုအပေါ် မူတည်၍ dopamine ပမာဏတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပျက်စီးသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်“ မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုကောင်း” ကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲအချက်ပြလိမ့်မည်။
Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင် (48) dopamine သည်ပျော်မြူးစေသော (hedonic) sucrose ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် dopamine မလိုအပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် dopamine ကွယ်ပျောက်သွားသည့်ကြွက်များက“ ကြိုက်သည်” ဟုဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသူတို့ကနျူကလိယ accumbens dopamine ဂီယာဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ် -related တွေကိုဖို့ "မက်လုံးပေး salience" ၏တာဝနျကိုဖျန်ဖြေကြောင်းဤအဆိုပြုထားနောက်ပိုင်းတွင် "အကြိုက်" ကနေကွဲပြားအဖြစ်ရည်မှန်းချက်အရာဝတ္ထုများအတွက် "လိုသော" ပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်ထိုကဲ့သို့သောအဆိုပြုထားပါပြီ။ သူတို့၏အမြင်အရတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သည် dopamine ကူးစက်မှုမရှိခြင်းကိုတစုံတရာ“ ကြိုက်နှစ်သက်” နိုင်သော်လည်းတိရိစ္ဆာန်များသည်ထိုသတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုရရှိရန်လိုအပ်သောအပြုအမူများကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် dopamine ဖြန့်ချိခြင်းသည်အရာဝတ္ထု၏ hedonic ဂုဏ်သတ္တိများ၏အတွင်းပိုင်းကိုယ်စားပြုမှုမဟုတ်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ Schultz et al အားဖြင့်စမ်းသပ်ချက်။ dopamine သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိရန်အပြုအမူကိုပုံဖော်ပေးသောခန့်မှန်း - အမှားအချက်ပြအဖြစ်အစားထိုးကြောင်းအစားအကြံပြုသည်။
dopamine function ကိုဒီအမြင်အားဖြည့်သင်ယူမှု၏ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (9, 53, 54)။ အားဖြည့်ခြင်းသင်ကြားခြင်းပုံစံများသည်သက်ရှိတစ်ခု၏ရည်မှန်းချက်သည်အနာဂတ်ဆုလာဘ်များအမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ရန်သင်ယူခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုအခြေခံသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များကိုအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသောအခါ popes နှင့် dopamine neuron တို့၏ phasic spiking များသည်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအမှားများ၏အတွင်းပိုင်းကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်ယူဆနိုင်သည်။ မျောက်၏စီစဉ်ထားသောသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်မှုများကို“ အေးဂျင့်” က“ ဝေဖန်” သည်။ အားဖြည့်အချက်ပြခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းသည့်အတိုင်းရရှိသောဆုလာဘ်များ) ။ ထို့ကြောင့် Dopamine ထုတ်လွှတ်မှုသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးကိုသင်ယူခြင်းကိုပုံသွင်းနိုင်ပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုတိုးတက်စေရန်လှုံ့ဆော်မှု - လှုပ်ရှားမှုသင်ယူမှုကိုပုံသွင်းပေးသည်။ (8, 9)။ အဆိုပါစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးယုံကြည်စိတ်ချရသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုကျော်လွန်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို, အရေအတွက်နှင့်တိုးမြှင့် Synaptic dopamine အဆင့်ဆင့်၏ဇွဲပေးထားသောဤယူဆချက်တစ်ခုဟောကိန်းထုတ်အကျိုးဆက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပို့ဆောင်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှု၏လေးနက် overlearning ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အများကြီးမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလေ့လာခဲ့သည့်မျောက်အတွက်, dopamine အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်အတွက်အကျဉ်းပြီးတော့ Activision နေတာနှင့်ခဏလေးနားထားတာကခန့်မှန်း-အမှား signal ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးအဖြစ်မူးယစ်ဆေးအများအပြားနာရီပြုမူစေခြင်းငှါဤသို့တစ်ဦးကလုံးဝပုံမှန်မဟုတ်သော dopamine signal ကိုထုတ်လုပ်ရန်, လုပ်သူများနှင့် phasic နှစ်ဦးစလုံး dopamine လွှတ်ရာအားလုံးပုံမှန်ပုံစံများနှောင့်အယှက်လိမ့်မယ်။ ဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေး-related dopamine kinetics ၏ဆိုးကျိုးများသာလေ့လာခဲ့ခံရဖို့စတင်နေကြသည် (55).
အဆိုပါ Prefrontal Cortex များအတွက်တစ်ဦးကအခန်းက္ပ
ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမှာ, သက်ရှိသူတို့တွင် select လုပ်ပါကလိုအပ်သောအောင်, များစွာသောပန်းတိုင်များကိုတန်ဖိုးထား။ စွဲလမ်း၏တစ်ဦးကသိသာထင်ရှားသောရှုထောင့်ကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့အားရည်မှန်းချက်ရွေးချယ်ရေး၏ရောဂါဗေဒကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဘိုးပြတ်ပေါ်တွင်အခြေခံရည်မှန်းချက်များ, သူတို့ကိုတန်ဖိုးတာဝန်ကျတဲ့နေရာနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုရွေးချယ်ရေး၏ကိုယ်စားပြုမှုဟာ prefrontal cortex အပေါ်မူတည် (56-59)။ အစားအစာသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူများအတွက် foraging များအတွက်အောင်မြင်သောရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူပြီးစီး, foraging ရှိမရှိ (သို့မဟုတ်ခေတ်သစ်ကာလ၌, စျေးဝယ်), အတားအဆီးများနှင့်အာရုံပြံ့လှငျ့ခဲ့ပေမယ့်ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်သည်ကြောင်းလုပ်ရပ်တွေကိုတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးတိုးချဲ့ sequence ကိုလိုအပ်သည်။ အောင်မြင်တဲ့နိဂုံးချုပ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုခွင့်ပြုထားကြောင်းအဆိုပါသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် prefrontal cortex အတွင်းရည်မှန်းချက်ကိုယ်စားပြု၏တက်ကြွပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်မူတည်မှထင်နေသည် (56, 59)။ ထို့ပြင်သူကသစ်ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးဇွဲရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်သော prefrontal cortex အတွင်းသတင်းအချက်အလက်ကို update လုပ်နိုင်စွမ်း phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့်န့်သတ်ထားထားပြီးကြောင်းတွေးဆထားသည် (8, 60).
phasic dopamine လွှတ်ပေးရေး prefrontal cortex အတွက် Gates signal ကိုပေးလျှင်, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး prefrontal cortex အတွက်အဖြစ်နျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက်ပုံမှန် dopamine-ဆက်စပ်သင်ယူမှု disrupts တဲ့အစွမ်းထက်ပေမယ့်အလွန်အမင်းပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ် signal ကိုထုတ်လုပ်မယ်လို့ (9, 19)။ ထို့အပြင်တစ်ဦးစွဲလူတစ်ဦးထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, မှအာရုံကြော adapter, အလွန်အကျွံ dopaminergic bombardments အတွက် (61) သဘာဝကဆုလာဘ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် dopamine လွှတ်ပေးရန်စေမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်အားနည်း dopamine ဆွထုတ်ယူကြောင်းဆုလာဘ်-related တွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့ချစေခြင်းငှါ,; သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစွဲလူတစ်ဦးအတွက်တွေးဆ prefrontal Gates ယန္တရားဖွင့်လှစ်ရန်ပျက်ကွက်ထို့ကြောင့်ရည်မှန်းချက်ရွေးချယ်ရေးသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပျက်ကွက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းများ၏ upshot အရှင်စွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုအထောက်အကူပြုအားကောင်းကွာသည်အခြားရွေးချယ်မှုကနေမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုဆီသို့ overweighted နှင့်, လောကီသားတစ်ဦးကတဖက်သတ်ကိုယ်စားပြုမှုပါလိမ့်မယ်။ ကနဦး neuroimaging လေ့လာမှုများစွဲဘာသာရပ်များအတွက် cingulate cortex နဲ့ Orbital prefrontal cortex အတွက် activation ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများအစီရင်ခံကြောင်းမှတ်သားဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဒါဟာဖြစ်ပါသည် (62-64).
ပို. neurobiological စုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်သူများနှင့် phasic dopamine အချက်ပြမှုများ, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကသူတို့ကိုနှောင့်အယှက်ပေးသောအတွက်နည်းလမ်းများနှင့်နှောင့်အယှက်များအလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ, နှိုးဆွ-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှစ်ခုလုံးအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏လက်ရှိနားလည်မှုများ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပေမဲ့ -action သင်ယူမှုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အများအပြားအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးရရှိနိုင်မှုခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုနျူကလီးယပ် accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dopamine လုပ်ရပ်များအားဖြင့်ကြီးမားမက်လုံးပေး salience အပေါ်ယူမယ်လို့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူ repertoire အားကောင်းသည့် prefrontal cortex နဲ့ dorsal striatum အတွက် dopamine လုပ်ရပ်များအားဖြင့်စုစည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း (9, 18, 19, 23, 65).
လှုံ့ဆော်မှု - ဆုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု - အရေးယူသင်ယူမှုထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ် "လိုလား" အဖြစ်အထူးသဖြင့်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတိကျသောအခြေအနေများအတွင်းဖြစ်ပေါ်တိကျတဲ့တွေကိုဆက်စပ်, ဆုလာဘ်ရရှိရန်အရေးယူနှင့်ဆုလာဘ်၏စားသုံးမှု။ (အခြေအနေ၏အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခုမှာဆုသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာပေးဆပ်ခြင်းရှိ / မရှိဖြစ်သည် ; ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ် cue ကြုံနေရလမ်းပေါ်မှာအတူတူ cue ကြုံနေရထက်အရေးယူဘို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဆိုလိုရှိပါတယ်။ ) တစ်ဦး cue ၏အရေးပါမှုကိုသင်ယူခြင်းနှင့်တစ်ဦးသင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုနဲ့သတင်းအချက်အလက်ချိတ်ဆက်အချက်အလက်များ၏တိကျပုံစံများ၏သိုလှောင်မှုလိုအပ် ဦးနှောက်ထဲမှာ။ အဆိုပါ cue ထိရောက်သောနှင့်ထိရောက်သောအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်ဒီအသိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအကျိုးကို-related လှုံ့ဆော်မှု၎င်း၏အဘိုးပြတ်နှင့်အရေးယူပာတဲ့စီးရီး၏ပြည်တွင်းရေးကိုယ်စားပြုပေးရမညျ (19)။ အလားတူအန္တရာယ်အချက်ပြကြောင်းဆန္ဒရှိတွေကိုများအတွက်စစ်မှန်သောဖြစ်ရမည်။
dopamine လုပ်ဆောင်ချက်၏ခန့်မှန်း-အမှားအယူအဆမှန်လျှင် phasic dopamine တွေကို၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အဓိပ်ပာယျကို update လုပ်ဖို့ဦးနှောက်အဘို့လိုအပ်ပါသည်။ prefrontal cortex function ကို၏ dopamine-gating ယူဆချက်မှန်ကန်ပါလျှင်, phasic dopamine ရည်မှန်းချက်ရွေးချယ်ရေး update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, သို့သော်, dopamine သက်ရှိများများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့; dopamine အာရုံခံဆုလာဘ်-related အမြင်, အစီအစဉ်များ, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသတ်မှတ်ကြပါဘူး။ အဆိုပါ dopamine စနစ်ကတစ်စုပေါင်းပစ်ခတ်နှင့် forebrain တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်ပရောဂျက်စေခြင်းငှါ၎င်း midbrain တည်ရှိသောဆဲလ်အသေကောင်များအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကို၏ဗိသုကာ, တစ်ခုတည်းတွင် neuron မျိုးစုံတိကျသောသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ဖို့အထောက်အကူမပြုပစ်မှတ်-ဖြစ်ပါတယ် innervating နှင့်အတူ (67)။ အစား၊ ဤ“ မှုန်ရေမွှားနှင့်တူသော” ဗိသုကာသည်အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုပာ၏တိကျသောကိုယ်စားပြုမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသော ဦး နှောက်ဆားကစ်များစွာတွင်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှုများအားညှိနှိုင်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အရာများ (ဥပမာ - လမ်းကြားတစ်ခု၊ ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခု၊ သို့မဟုတ်အနံ့အချို့နှင့် - နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည့်အနံ့ - မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကိုခန့်မှန်းခြင်း) အကြောင်းတိကျသောသတင်းအချက်အလက်သည်အတွေ့အကြုံအသေးစိတ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အာရုံခံမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်စနစ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မြင့်မားသောသစ္စာနှင့်အတူ။ အချက်များ၊ သူတို့၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်လေ့လာသောမော်တာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ တိကျသော point-to-point neurotransmission ကိုအထောက်အပံ့ပေးသော circuit များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာ glutamate ကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် neurotransmitter ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်နျူကလိယ accumbens, prefrontal cortex, amygdala နှင့် dorsal striatum ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများတွင်အချိုမှုနှင့် dopamine အာရုံခံများအကြားဆက်စပ်မှုရှိသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည် (68, 69) သောသက်ရှိများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေကို၏မက်လုံးပေး salience အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသီးခြားအာရုံခံသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်တိကျတဲ့အရေးယူပာအတူတကွတတ်၏။ တိုက်ရိုက်စွဲဆုချနှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်ဉာဏ်စနစ်တစ်ရောဂါဗေဒပြန်ပေးဆွဲကိုကိုယ်စားပြုသောအယူအဆအောက်ပါအတိုင်းရာမှဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အရေးယူတုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကို, အသင်းအဖွဲ့များရေရှည်မှတ်ဉာဏ်မြားအခြေခံသည်အခြားပုံစံများနှင့်ဆင်တူဖြစ်များပါတယ် (11, 19).
Robinson နဲ့ Berridge (30, 70) တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအမြင်-The စွဲ၏မက်လုံးပေးာင်းအယူအဆအဆိုပြုခဲ့သည်။ ဒီအမြင်အတွက်နေ့စဉ်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးတချို့မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများမှသည်းခံပေမယ့်တိုးတက်သောတိုးမြှင့်-ထိခိုက်မခံတဲ့-၏အခြားသူတွေကိုထုတ်လုပ် (71)။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်များတွင်ကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး၏နေ့စဉ်ဆေးထိုး locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးတက်သောတိုးထုတ်လုပ်သည်။ ာင်းအသက်ရှည်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်အရေးကြီးတဲ့အချို့ကိုပုံစံများ context-မှီခိုထုံးစံ၌ဖျောပွနိုငျသောကွောငျ့အသိစွဲတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် (72)။ ထို့ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ကြွက်များသည်သူတို့၏အိမ်အိတ်များထက်စစ်ဆေးမှုပြုထားသောလှောင်အိမ်ထဲတွင်နေ့စဉ်အမ်ဖီတမင်းဆေးထိုးခြင်းကိုခံယူပါကထိုစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲ၌ထပ်မံထည့်သွင်းသည့်အခါ၎င်းတို့သည်ထိခိုက်လွယ်သောရွေ့လျားနိုင်သောအပြုအမူကိုပြကြသည်။ အဆိုပါမက်လုံးပေး sensitization သီအိုရီ locomotor အပြုအမူ sensitized နိုင်သကဲ့သို့, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (hedonic တန်ဖိုးသို့မဟုတ် "နှစ်သက်" ဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) မက်လုံးပေး salience သတ်မှတ်တဲ့အာရုံကြောစနစ်ကအသိအမှတျပွု။ ဤမက်လုံးသည်အဓိကအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောအချက်များဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွန်တရာလိုချင်သည် (30, 70)။ အဓိကမှာမက်လုံးပေးာင်းအမြင်အကျိုးကိုခန့်မှန်း-အမှား signal ကိုအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်း dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် (9)။ ဒါဟာအစမူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကို၏မက်လုံးပေး salience စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တိုးမြှင့်ကြောင်းကျွန်တော်ကတိကျတဲ့ပုံပေါ်လိမ့်မယ်။ ထိုမှတပါး, မူးယစ်ဆေးလိုသောသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးရှာကိုသက်ဝင်ဤတွေကိုနိုင်စွမ်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုယန္တရားများအပေါ်မူတည်ကြောင်းမျှသဘောမတူလည်းမရှိ။ သဘောထားကွဲလွဲမှု၏အချက်ကြောင့်လက်ရှိတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်နားလည်သကဲ့သို့, အကဲဆတ်ခြင်းအာရုံကြောယန္တရားရှိမရှိပင်ဖြစ်သည်လူ့စွဲအတွက်လိုအပ်သောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များခုနှစ်, sensitized locomotor အပြုအမူဟာ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအစပျိုးနေသည်ထို့နောက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ် (73, 74), ယူဆရ dopamine တုံ့ပြန်မှုများတိုးမြှင့်မှတဆင့်။ ယင်းနျူကလိယမှ ventral tegmental ဧရိယာစီမံကိန်း၏ဆွေမျိုးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း accumbens ဒါမှမဟုတ် prefrontal cortex နဲ့အများအပြားတွင် neuron နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဤစီမံချက်၏စွမ်းရည်ကို၎င်းထိုသို့ (sensitized) ကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်ရန်ထိုကဲ့သို့သောရှင်းပြဖို့ခက်ခဲသည်ပေးထားသော dopamine တုန့်ပြန်တိကျတဲ့ drug- တွဲနိုင် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်၏ယန္တရားအပေါ်ခေါ်ဆိုခြင်းမရှိဘဲတွေကို related ။ ငြိမ်မရောထွေးစမ်းသပ်စာပေနေသော်လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ AMPA အချိုမှု receptors ချို့တဲ့ဗီဇ-နောက်ကောက်ကြွက်၏လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကို (ထိုနောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သော) ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor ထိခိုက်စေဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအကြားတစ်ဦး dissociation တွေ့၏ ယခင်ကကင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စကားစပ်ထဲမှာထည့်ထားသောအခါ, ထိုကြွက်မဟုတ်တော့တဲ့အေးစက် locomotor တုံ့ပြန်မှုသရုပ်ပြနေသည်, မသူတို့အခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေးပြသခဲ့ပါ (75)။ နိမ့်ဆုံးမှာဤအစမ်းသပ်ချက်များ၏ encoding ကတွဲဖက်သင်ယူမှုယန္တရားများ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကို underscore တိကျတဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေကိုနှင့်အတူဤအတွေကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက် တိကျတဲ့ တုံ့ပြန်မှု (19, 23)။ ာင်း (ခိုငျအမှုကိုပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ) ကိုလူသားတွေအတွက်သရုပ်ပြခံရဖို့ခဲ့ကြသည်ရင်တောင်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုသီးခြားအခင်းအကျင်းအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် dopamine-မှီခိုသင်ယူမှုယန္တရားများတိုးမြှင့်ထက်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုမရှင်းလင်းသည်။ ဒါဟာမြင့်မားတိကျတဲ့, အားကောင်း overvalued မူးယစ်ဆေးတွေကိုများ၏ကိုယ်စားပြုမှုကုဒ်သွင်းဘို့နှင့်တိကျသောမူးယစ်ဆေး-ရှာအပြုအမူတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးတွင်သူတို့အားသင်ယူခြင်းယန္တရားများဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စွဲတစ်ခုရှင်းပြချက်က၎င်း၏ဇွဲ၏သီအိုရီလိုအပ်သည်။ အတော်များများကမေးခွန်းများကိုရေရှည်မှတ်ဥာဏ်နှစ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ပင်တစ်သက်တာအဘို့ဆက်လက်ရှိသောယန္တရားများအကြောင်းကိုဆက်လက်တည်ရှိ (15, 16, 76)။ မြင်ကွင်းကဤအချက် မှစ. , မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှ sensitized dopamine တုံ့ပြန်မှုမူးယစ်ဆေး-related ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အမှတ်တရများ၏တိုးမြှင့်စုစည်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်း၏ဇွဲ၏ဝိသေသဖြစ်ထင်ကြသည် synapses နှင့်ဆားကစ်၏ပြုပြင်အပေါ်အခြေခံပြီးခံရဖို့ပုံပဲ ရေရှည်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ် (15, 16).
ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးစွဲလမ်း၏ယန္တရားများနဲ့ Long-Term မှတ်ဉာဏ်
အထက်ဖော်ပြပါဆွေးနွေးချက်အရအပြုအမူနှင့်စနစ်အဆင့်များ၌စွဲလန်းနေသောလောင်းကစားမော်လီကျူးနှင့်ဆယ်လူလာယန္တရားများသည်နောက်ဆုံးတွင်ရှင်းပြရမည်။ ၁) ထပ်ခါတလဲလဲ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသို့မည်ကဲ့သို့ခိုင်မာစေသည်၊ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်သည်။ (၃) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များသည်အပြုအမူအားမည်သို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Synaptic plasticity ထုတ်လုပ်သော intracellular အချက်ပြစနစ်သည်စွဲလမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းယန္တရားများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်ပေးသောအချက်ပြမှုများကိုအာရုံကြောလုပ်ဆောင်မှုတွင်ရေရှည်ပြောင်းလဲမှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အာရုံခံဆားကစ်များပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Synaptic plasticity သည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ heuristically အားဖြင့်လက်ရှိဆက်သွယ်မှုများ၏အားကိုသို့မဟုတ်အလေးချိန်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်ယန္တရားများနှင့် dendrites သို့မဟုတ် axon များ၏ဖွဲ့စည်းပုံအား synapse ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသို့ ဦး တည်စေနိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ (15).
ဖော်ပြထားလျက်ရှိသည်အတိုင်း, မူးယစ်ဆေးတွေကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်နှင့်တိကျသောအမူအကျင့်ပာဖို့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစွဲအခြေခံသည့်ယန္တရားများအနည်းဆုံးအချို့တိကျသော Associates နှင့် synapses ဖြစ်ရမည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် synapses တိကျတဲ့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြောင်း Synaptic အစှမျးသတ်တိကိုပြောင်းလဲများအတွက်အကောင်းဆုံးစရိုက်လက္ခဏာတွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းယန္တရားများရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အမျိုးမျိုးပုံစံများအပါအဝင်အတွေ့အကြုံကို-မှီခို plasticity ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားရန်တွေးဆခဲ့ကြ (77, 78)။ Synaptic plasticity ၏ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားရေရှည်အလားအလာသို့မဟုတ်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ၏ရလဒ်အဖြစ်မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်လျော့အချက်ပြလက်ခံရရှိဖြစ်ကြောင်းအာရုံခံအတွက်မျိုးဗီဇများနှင့်ပရိုတိန်းစကားရပ်ပြောင်းလဲနေဖြင့်အာရုံကြော circuitry ၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့နောက်ပိုင်းတွင်ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါအရှင်စွဲနှင့်အတူပေါ်ပေါက်ဖို့ posited ဖြစ်ကြောင်းအာရုံကြော circuit ကို function ကို၏မူးယစ်သွေးဆောင်ပွောငျးလဲဘို့အရေးကြီးသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းယန္တရားများဖြစ်လာကြပါပြီ (11)။ အဲဒီမှာနှစ်ဦးစလုံးယန္တရားများအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးဆက်အဖြစ် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏အခြားပစ်မှတ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကောင်းသောအထောက်အထားများကိုယခုဖြစ်တယ်, ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားသူတို့စွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှု (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်, ကိုးကားတွေ့မြင်ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန် 11, 79-81)။ ရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါအခြေခံမော်လီကျူးယန္တရားများ key ကိုပရိုတိန်းများ phosphorylation ပြည်နယ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, အ synapses မှာအချိုမှု receptors ၏ရရှိမှုမြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏စည်းမျဉ်းများပါဝင်သည် (78, 82).
အမှတ်တရများဆက်လက်ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကို (15, 16, 76) စွဲဖို့အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးသေးကျေနပ်ဖွယ်ပြန်ပြောသည်, ဒါပေမယ့်ဇွဲနောက်ဆုံးမှာ synapses နှင့်ဆားကစ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါဝင်မှထင်နေသည်မဟုတ်။ လိုက်စားအစောပိုင်းရလဒ်တွေကိုစိတ်ကြွဆေးများနှင့်ကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွင်း dendrites အတွက် morphological ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရန်နိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြပါပြီ (83, 84).
dendrites, axon နှင့် synapses ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ဘို့အရေးပါတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းယန္တရားမျိုးဗီဇစကားရပ်တွင်သို့မဟုတ်ပရိုတိန်းဘာသာပြန်ချက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှည် up- တစ်ခုသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်ပရိုတိန်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏စည်းမျဉ်း-Down နှင့် 1) 2: အချိန်သင်တန်း၏အစွန်းမှာ, မျိုးဗီဇစည်းမျဉ်းနှစ်မျိုးစွဲအခြေခံသည့်တွေးဆရောဂါဗေဒမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင် ) ၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့, အရှင်, synapses ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင် Synaptic ခွန်အားသစ်ကို synapses ၏မျိုးဆက်, ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိ synapses ၏တံစဉ်များကိုပြောင်းလဲမှုများမှဦးဆောင် (ဆိုလိုသည်မှာ morphological ပွောငျးလဲ) မှဦးဆောင်နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ် (သို့မဟုတ်ပရိုတိန်းဘာသာပြန်ချက်) ၏အကျဉ်းချုပ်ပေါက်ကွဲပြီး, ဆားကစ်။ မျိုးဗီဇစကားရပ်မြားတှငျပွောငျးလဲနှစ်ယောက်စလုံးအမျိုးအစားများ dopamine ဆွတုန့်ပြန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမှလေ့လာတွေ့ရှိပြီ (85, 86).
နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် dorsal striatum လက်ရှိစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ (နှင့်အခြားလှုံ့ဆော်မှု) မှတုန့်ပြန်ပေါ်ပေါက်ဖို့လူသိများအရှည်ဆုံးသက်တမ်းမော်လီကျူးအပြောင်းအလဲတချို့တက်-စည်းမျဉ်းကတော့ကူးယူအချက်ΔFosB၏တည်ငြိမ်, posttranslationally ပြုပြင်ထားသောပုံစံများဖြစ်ပါသည် (85)။ အဆိုပါယာယီရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးမှာမျိုးဗီဇ၏ကြီးမားသောနံပါတ်၏ (နာရီမိနစ်) ယာယီစကားရပ် dopamine ၏ activation အပေါ်ဖွယ်ရှိမှီခိုဖြစ်ပါတယ်: D1 receptors နှင့်ကူးယူအချက် CREB, ပရိုတိန်း binding ဟာသိသိ amp-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်၏ (86)။ CREB ဟာသိသိ amp-မှီခိုပရိုတိန်း kinase နှင့်အတော်ကြာ Ca အပါအဝင်မျိုးစုံပရိုတိန်း kinases က activated ဖြစ်ပါတယ်2+ထိုကဲ့သို့သောကယ်လစီယမ် / calmodulin မှီခိုပရိုတိန်း kinase အမျိုးအစား IV အဖြစ် -dependent ပရိုတိန်း kinases (87, 88)။ CREB ဟာသိသိ amp နှင့် Ca နှစ်ဦးစလုံးမှတုံ့ပွနျနိုငျသောကွောငျ့2+ လမ်းကြောင်းထို့ကြောင့်တစ်ဦးတိုက်ဆိုင်မှု detector အဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသညျ, ယင်း၏ activation ရေရှည်အလားအလာအတွက်နှင့်ဖွဲ့စည်းမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရှုမြင်ထားသည်။ တကယ်တော့, ကျောရိုးနှင့်ကြွက်တွေမှာနှစ်ဦးစလုံးသုတေသန၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ် (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်, ကိုးကားတွေ့မြင်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အတွက် CREB များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါသည် 87 နှင့် 88).
ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အတော်ကြာပုံစံများအတွက် CREB များအတွက် ပို. ပို. ကောင်းမွန်စွာထူထောင်အခန်းကဏ္ဍပေးထားရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးရောဂါဗေဒလုအဖြစ်စွဲလမ်းတဲ့သီအိုရီပေးထား (87, 88)နှင့် CREB သက်ဝင်စေဖို့ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွမ်းရည်ကိုပေးထား (88-90), ဆုလာဘ်-related အမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီးအတွက် CREB ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအခန်းကဏ္ဍအတွက်အများကြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ (11, 19)။ ထိုကဲ့သို့သောအခန်းကဏ္ဍများအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေနေဆဲချို့တဲ့နေပါတယ်။ အဆိုပါ dopamine D ကို၏ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဆွချိတ်ဆက်အတော်လေးခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားသို့သော်ရှိပါတယ်1 သည်းခံမှုနှင့်မှီခိုဖို့အဲဒီ receptor-CREB လမ်းကြောင်း။ သည်းခံမှုနှင့်မှီခိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကောင်းဆုံးလေ့လာခဲ့ CREB-စညျးမဉျြးစညျးကမျးပစ်မှတ်မျိုးဗီဇဟာ prodynorphin ဗီဇဖြစ်ပါသည် (91-93), Kappa opioid အဲဒီ receptor agonists သော endogenous opioid dynorphin peptides encodes ရာ။ ကိုကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး: D ၏ dopamine ဆွဖို့ဦးဆောင်1 CREB phosphorylation နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ် prodynorphin ၏ activation မှအလှည့်များတွင်ဦးဆောင်သည့်နျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက်အာရုံခံအပေါ် receptors, (93)။ ရရှိလာတဲ့ dynorphin peptides အရှင် dopamine စနစ်များ၏တုန့်ပြန်လျော့ကျလာသူတို့ midbrain dopamine အာရုံခံများ၏ဆိပ်ကမ်းကနေ dopamine ၏လွှတ်ပေးရန်တားစီးရာမှ striatal အာရုံခံ၏မှုများထပ်တလဲလဲပေါင်ပစ္စည်း axon မှသယ်ယူပို့ဆောင်ကြသည် (91, 94)။ : D1 dynorphin အတွက်အဲဒီ receptor ကမကထပြုခဲ့တိုးအရှင်နောက်ထပ် dopamine လွှတ်ပေးရန်လြော့ပြန်အစာကျွေးသောနျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက်ပစ်မှတ်အာရုံခံအလွန်အကျွံ dopamine ဆွဖို့ homeostatic လိုက်လျောညီထွေအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်နိုင်ပါတယ် (91)။ ဒီအိုင်ဒီယာနှင့်ကိုက်ညီသည်နျူကလိယအတွက် CREB ၏ overexpression ဗီဇစကားရပ် prodynorphin တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုတိုးကကမကထပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေ accumbens (95)။ ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတစ် Kappa အဲဒီ receptor ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ဒီ model အတွက်ပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ (95).
ထိုကဲ့သို့သော dopamine စနစ်များ၏တုန့်ပြန်ချပေးရပါတယ်ရာ dynorphin ၏ induction ကြောင့် Homeostatic adapter, မှီခိုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာလိမ့်မယ် (26, 96)။ စွဲလမ်း၏ pathogenesis အတွက်မှီခို၏ကန့်သတ်အခန်းကဏ္ဍပေးထား (6, 11, 19, 27, 40)အခြားလေ့လာမှုများ (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်, ကိုးကားတွေ့မြင်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များတိုးမြှင့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေအံ့သောငှါအလားအလာမော်လီကျူးယန္တရားများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ 12, 13)။ နေ့စွဲဖို့အကောင်းဆုံး-လေ့လာခဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက်ကူးယူအချက်ΔFosBဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးသွေးဆောင် Transgene mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်ΔFosB၏ကြာရှည် overexpression ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတိုးလာနှင့် CREB နှင့်ΔFosB၏ရေတိုရေရှည်ထုတ်ဖော် overexpression မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လျော့ကျလာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ (97)။ ထို့အပြင် mouse ကိုဦးနှောက်အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်တစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားစွာကွဲပြားခြားနားသောပရိုဖိုင်းကို CREB သို့မဟုတ်ΔFosB၏ရေတိုရေရှည်စကားရပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ΔFosB၏ကြာရှည်စကားရပ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (97)။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောလိုလားသူ dynorphin ဗီဇအဖြစ် CREB ၏မြစ်အောက်ပိုင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်အနည်းဆုံးအချို့မျိုးဗီဇ, ထိုများမှာ (93), သည်းခံစိတ်များနှင့်မှီခိုနှင့်ΔFosB၏မြစ်အောက်ပိုင်းရှိပါကြောင်းဗီဇဆုလာဘ်များနှင့်မှဆုချ-related တွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်အံ့သောငှါပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ အားလုံးယန္တရားများသူတွေဟာ CREB သိသိသာသာသာမန်အခြေအနေများတွင် CREB phosphorylation နှင့် dephosphorylation ၏ပုံမှန်အချိန်သင်တန်း (မိနစ်) ကျော်လွန် overexpress ဖို့ကြောင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတည်ဆဲစမ်းသပ်နည်းပညာများအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်-related ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီးအတွက် CREB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍလက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများ၏အခြေခံပေါ်မှာစွန့်ပစ်မပေးသင့်ပါဘူး။ စွဲလမ်း၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နယူးအားထုတ်မှု (98, 99) Synaptic plasticity, Synaptic အသစ်ပြန်ပြုပြင်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမှမူးယစ်သွေးဆောင်ဗီဇစကားရပ်ပြန်ပြောပြဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သက်သေပြလိမ့်မည်။
ြဒပ်မဲ့သော | ဆုလာဘ်များ၏ကြိုးပမ်းရန် Related ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်၏တစ်ဦးက Hijacking လုပ်ခြင်း | မူးယစ်ဆေး-Associated တွေကိုသီးခြား၏ဂယက်ရိုက် | ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးစွဲလမ်း၏ယန္တရားများနဲ့ Long-Term မှတ်ဉာဏ် | နိဂုံး | ကိုးကား
မူးယစ်လုပ်ဆောင်ချက်၏ dopamine ယူဆချက်ထက်နည်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအကြာငွေကြေးကိုရရှိခဲ့ (38-40)။ ထိုအချိန်တွင် dopamine အကြီးအကျယ်တစ် hedonic signal ကိုအဖြစ် conceptualized ခဲ့ပါတယ်နှင့်စွဲ compulsive မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏တံခါးသော့ကိုဒရိုင်ဘာအဖြစ်ရှုမြင်မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာအတူ hedonic အသုံးအနှုန်းများအတွက်အကြီးအကျယ်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကွဲပြားခြားနားအဆင့်ဆင့်ကိုပိုမိုမကြာသေးမီအားထုတ်မှု dopamine အရေးယူမှုတစ်ဝေးချမ်းသာနှင့်ဝေးပိုမိုရှုပ်ထွေးရုပ်ပုံထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်မည်သို့စွဲလမ်းထုတ်လုပ်မယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ဖြေကြပါပြီအဖြစ်အသစ်သောအချက်အလက်များနှင့်အသစ်သောသီအိုရီ Construction အဖြစ်အများအပြားမေးခွန်းထုတ်စရာကြပြီ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်တွင်အဘယ်သို့ငါကျနော်တို့ယနေ့အထိစွဲအကြောင်းကိုငါသိ၏အကောင်းဆုံးကဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ယန္တယားတစ်ခုရောဂါဗေဒလုကိုကိုယ်စားပြုသောအမြင်အားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကိုလည်းပဟေဠိများစွာကိုအပိုင်းပိုင်းကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးကြောင့်နှောင့်အယှက်များအလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ, ကွဲပြားခြားနားသောဆားကစ်အတွက်လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine အချက်ပြနှောင့်အယှက်များနှင့်ပြီးသောထိုသို့သောအတိအကျထုံးစံရှိသည်အတိုင်းအချို့သောအစားကြီးမားသူတို့, အပါအဝင်ပျောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့် စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများ synapses နှင့်ဆားကစ်ပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေးသောဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အခြေခံများနှင့်လက်တွေ့မှ neuroscience သျောလညျးဤအစိန်ခေါ်မှုများကျွန်တော်အနည်းငယ်တိုတောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းခဲ့ထက်စွဲတစ်ဝေးထက်ပိုတိကျမှန်ကန်ပြီးအားကောင်းရုပ်ပုံထုတ်လုပ်ပါပြီ။
သြဂုတ်လ 19, 2004 လက်ခံရရှိ; တည်းဖြတ်မူနိုဝင်ဘာ 15, 2004 လက်ခံရရှိ; ဒီဇင်ဘာ 3, 2004 လက်ခံခဲ့သည်။ Neurobiology, Harvard Medical School ကဘော်စတွန်ဦးစီးဌာနထံက၎င်း, နှင့် Provost, ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၏ရုံး။ ဒေါက်တာ Hyman, အ Provost ၏ရုံး, မက်ဆာချူးဆက်ခန်းမ, ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်, ကိန်းဘရစ်, MA 02138 မှစာပေးစာယူနှင့်ပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုများနေရပ်လိပ်စာ; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] (e-mail,) ။
Hser YI၊ Hoffman V၊ CE Grella၊ Anglin MD - မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ၃၃ နှစ်ကြာနောက်ဆက်တွဲ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု 33; 2001: 58-503
McLellan AT၊ Lewis DC၊ O'Brien CP၊ Kleber HD - ဆေးဝါးမှီခိုမှု၊ နာတာရှည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်းမှု - ဆေးကုသမှု၊ အာမခံနှင့်အကျိုးရလဒ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ ဂျေအေအေ; 2000: 284-1689
Merikangas KR, Stolar M၊ Stevens DE, Goulet J, Preisig MA, Fenton B, Zhang H, O'Malley SS, Rounsaville BJ: ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုပြordersနာများကိုမိသားစုမှပြန့်ပွားစေသည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 55: 973-979
Kendler KS, Prescott CA, Myers J, Neale MC - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဘုံစိတ်ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု 2003; 60: 929-937
Rhee SH, Hewitt JK, Young SE, Corley RP, Crowley TJ, Stallings MC - ပစ္စည်းဥစ္စာစတင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြproblemနာကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်အသုံးပြုခြင်းအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု 2003; 60: 1256-1264
Wikler A, Pescor F: မော်ဖင်းအကိုက်စွဲသည့်ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်စွဲခြင်းကိုတားဆီးခြင်း၊ opioid- အရက်သောက်ခြင်းအပြုအမူအားပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်“ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း” ၏ပုံမှန်အခြေအနေ။ Psychopharmacologia 1967; 10: 255-284
O'Brien CP၊ Childress AR၊ Ehrman R, Robbins SJ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏အကြောင်းရင်းများ၊ J ကို Psychopharmacol 1998; ၁၂: ၁၅–၂၂
Schultz W, Dayan P, Montague PR: ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုအတွက်အာရုံကြောအလွှာ။ သိပ္ပံ 1997; 275: 1593-1599
Montague PR၊ Hyman SE, Cohen JD: အမူအကျင့်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုတွင် dopamine အတွက်တွက်ချက်မှုအခန်းကဏ္။ ။ သဘာဝ ၂၀၀၄၊ 2004: 431-760
Redish AD: စွဲစွဲလမ်းမှုသည်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်ရှိနေသည်။ သိပ္ပံ ၂၀၀၄; 2004: 306-1944
Hyman SE, Malenka RC: စွဲလမ်းမှုနှင့် ဦး နှောက်။ နတ်ဗြာ Neurosci 2001; 2: 695-703
Nestler EJ: စွဲနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးနှင့်ဆယ်လူလာအလွှာများ။ Neurobiol Learn Mem 2002; 78: 637-647
Chao J, Nestler EJ: မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏မော်လီကျူး neurobiology ။ Annu ဗြာ Med 2004; 55: 113-132
Kelley AE - မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲခြင်း - မျှဝေအာရုံကြောဆိုင်ရာ circuit နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuron 2004; 44: 161-179
Chklovskii DB, Mel BW, Svoboda K: Cortical rewiring နှင့် information storage ။ သဘာဝ ၂၀၀၄၊ 2004: 431-782
Dudai Y: ရေရှည်အမှတ်တရများ၏မော်လီကျူးအခြေစိုက်စခန်းများ - ဇွဲရှိမှုမေးခွန်း။ Curr Opin Neurobiol 2002; 12: 211-216
White NM - စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအားဖြည့်ဆေးများ။ စွဲ 1996; 91: 921-949
Robbins TW, Everitt BJ: မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း - အကျင့်ဆိုးများပေါင်းလာသည်။ Nature 1999၊ 398: 567-570
Berke JD, Hyman SE: စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဥာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuron 2000; 25: 515-532
Robbins TW, Everitt BJ: Limbic-striatal memory memory နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု။ Neurobiol Learn Mem 2002; 78: 625-636
Shizgal P ကို, Hyman အရှေ့တောင်: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွဲလမ်းပြည်နယ်များ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောသိပ္ပံ၏အခြေခံမူများထဲမှာ 5th ed ။ Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM အလိုအလျောက်တည်းဖြတ်။ နယူးယောက်, (စာနယ်ဇင်းအတွက်) McGraw-Hill က
Kelley AE, Berridge KC: သဘာဝဆုကျေးဇူးများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံ၊ စွဲစွဲစေသောဆေးများနှင့်ဆက်စပ်မှု။ J ကို Neurosci 2002; 22: 3306-3311
Berke JD - မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောသင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ယန္တရားများ။ နည်းလမ်းများ Med Med 2003; 79: 75-101
Hyman SE: အရက်သမားနှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်ခံထားရသူတစ် ဦး ။ ဂျမေရာ ၁၉၉၅; 1995: 274-837
Hutcheson DM, Everitt BJ, Robbins TW, Dickinson A: ဘိန်းဖြူစွဲခြင်းမှရုပ်သိမ်းခြင်း၏အခန်းကဏ္: - ဆုလာဘ်ကိုတိုးမြှင့်သလားသို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်းကိုအားပေးသည်။ Nat Neurosci 2001; 4: 943-947
Koob GF, Le Moal M: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု - hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ 1997; 278: 52-58
Stewart J, Wise RA: ဘိန်းဖြူကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအလေ့အထများကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်း - မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် naltrexone မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုဟန့်တားသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1992; 108: 79-84
Marinelli M, Piazza PV: ဂလူးကို့ကိုတိုဟိုက်ဟုန်းဟော်မုန်းများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။ Eur J ကို Neurosci 2002; 16: 387-394
Saal D, Dong Y, Bonci A, Malenka RC: အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးသည် dopamine neurons များတွင် synaptic adaptation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Neuron 2003; 37: 577-582; ဆုံးမခြင်း, 38: 359
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC: စွဲ။ Annu ဗြာ Psychol 2003; 54: 25-53
Tiffany ST: မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူဆိုင်ရာသိမြင်မှုပုံစံ - အလိုအလျောက်နှင့်အလိုအလျောက်မဟုတ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အခန်းကဏ္။ ။ Psychol ဗြာ 1990; 97: 147-168
Tiffany ST, Carter BL: တဏှာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အရင်းအမြစ်လော။ J ကို Psychopharmacol 1998; ၁၂: ၂၃-၃၀
Breiter HC၊ Gollub RL၊ Weisskoff RM၊ Kennedy DN, Makris N, Berke JD, Goodman JM, Kantor HL, Gastfriend DR, Riorden JP, Mathew RT, Rosen BR, Hyman SE - လူ့ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ Neuron 1997; 19: 591-611
Volm BA၊ de Araujo IE၊ Cowen PJ၊ Rolls ET၊ Kringelbach ML၊ Smith KA၊ Jezzard P၊ Heal RJ၊ Matthews PM: မက်သာဖက်ဖီတမင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနည်းပါးသောလူသားများအတွက်ဆုလာဘ်အစီအစဉ်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။ Neuropsychopharmacology 2004; 29: 1715-1722
Childress AR, Mozley PD, McElgin W, Fitzgerald J, Reivich M, O'Brien CP: cue-induced cocaine craving အတွင်း Limbic activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1999; 156: 11-18
Kilts CD, Schweitzer JB, Quinn CK, Gross RE, Faber TL, Muhammad F, Ely TD, Hoffman JM, Drexler KP: ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းနေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွန်းအားနှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု 2001; 58: 334-341
Bonson KR, Grant SJ, Contoreggi CS, Links JM, Metcalfe J, Weyl HL, Kurian V, Ernst M, London ED: အာရုံကြောစနစ်များနှင့် cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်း။ Neuropsychopharmacology 2002; 26: 376-386
Wise RA, Bozarth MA: စွဲလမ်းမှုစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်သီအိုရီ။ Psychol ဗြာ 1987; 94: 469-492
Di Chiara, G: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင် mesolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ofကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာယူဆချက်။ J ကို Psychopharmacol 1998; ၁၂: ၅၄-၆၇
Koob GF, Bloom FE: မူးယစ်ဆေးမှီခိုမှု၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ 1988; 242: 715-723
Pontieri FE၊ Tanda G၊ Di Chiara G: သွေးကြောသွင်းအတွင်းကိုကင်း၊ မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အမ်ဖီတမင်းသည်ကြွက်နူကလီးယပ်စ်၏“ အဓိက” နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက“ အခွံ” အတွင်းရှိ extracellular dopamine ကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 1995; 92: 12304-12308
Everitt BJ၊ ပါကင်ဆန် JA၊ Olmstead MC၊ Arroyo M၊ Robledo P၊ Robbins TW - စွဲခြင်းနှင့်ဆုချခြင်းတွင်ဆက်စပ်သောဖြစ်စဉ်များ - amygdala-ventral striatal subsystems များ၏အခန်းကဏ္။ ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1999; 877: 412-438
Johnson SW, North RA: Opioids သည်ဒေသခံ interneurons များ၏ hyperpolarization အားဖြင့် dopamine neuron များကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ J ကို Neurosci 1992; 12: 483-488
Giros B, Jaber M, Jones SR, Wightman RM, Caron MG: dopamine Transporter မပါရှိသောကြွက်များတွင်ကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းအကြားစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုနှင့်လျစ်လျူရှုမှု။ သဘာဝ 1996; 379: 606-612
Ventura R ကို, Alcaro တစ်ဦးက, Puglisi-Allegra S က: Prefrontal cortical norepinephrine လွှတ်ပေးရေးနျူကလိယ accumbens အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်, reinstatement နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Cereb Cortex 2005; ဖေဖော်ဝါရီ 23 EPub
Montague PR၊ Berns GS: အာရုံကြောစီးပွားရေးနှင့်တန်ဖိုးဇီဝအလွှာ။ Neuron 2002; 36: 265-284
Wise RA, Rompre PP: ဦး နှောက် dopamine နှင့်ဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ Psychol 1989; 40: 191-225
Berridge KC၊ ရော်ဘင်ဆင်တီ။ : ဆုချီးမြှင့်မှုတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္Whatမှာအဘယ်နည်း။ Brain Res Brain Res Rev 1998၊ 28: 309-369
Cannon CM, Palmiter RD: dopamine မပါဘဲဆုချ။ J ကို Neurosci 2003; 23: 10827-10831
Schultz W, Apicella P, Ljungberg T - နှောင့်နှေးသောတုန့်ပြန်မှုလုပ်ငန်းကိုလေ့လာခြင်းအဆင့်ဆင့်တွင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုဆုချီးမြှင့်ရန်နှင့်မျောက် dopamine အာရုံခံများ၏တုန့်ပြန်မှုများ။ J ကို Neurosci 1993; 13: 900-913
Hollerman JR, Schultz W: Dopamine အာရုံခံများသည်သင်ယူစဉ်ကာလအတွင်းဆုလာဘ်၏ခန့်မှန်းချက်အမှားအယွင်းကိုတင်ပြကြသည်။ Nat Neurosci 1998; 1: 304-309
Schultz W: dopamine အာရုံခံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol 1998; ၈၀: ၁-၂၇
Montague PR၊ Dayan P, Sejnowski TJ - ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသော Hebbian သင်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီး mesencephalic dopamine စနစ်များအတွက်မူဘောင်။ J ကို Neurosci 1996; 16: 1936-1947
Sutton RS, Barto AG က: စစ်ကူသင်ယူ။ ကင်းဘရစ်, Mass, MIT ကစာနယ်ဇင်း, 1998
Knutson B, Bjork JM, Fong GW, Hommer D, Mattay VS, Weinberger DR: အမ်ဖီတမင်းသည်လူ့မက်လုံးများထုတ်လုပ်မှုကိုပြုပြင်သည်။ Neuron 2004; 43: 261-269
Miller က EK, Cohen ကို JD: prefrontal cortex function ကိုတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံသီအိုရီ။ Annu ဗြာ Neurosci 2001; 24: 167-202
Matsumoto K, Suzuki W, Tanaka K: prefrontal cortex ရှိရည်မှန်းချက်အခြေပြုမော်တာရွေးချယ်ခြင်း၏အာရုံခံဆက်စပ်မှုများ။ သိပ္ပံ 2003; 301: 229-232
Roesch MR, Olson CR: အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသည်တန်ဖိုးနှင့် otivation ကိုရှေ့တန်းရှေ့ cortex တွင်ရရှိစေသည်။ သိပ္ပံ ၂၀၀၄; 2004: 304-307
Rolls ET: Orbitofrontal cortex ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်။ ဦး နှောက် Cogn 2004; ၅၅: ၁၁-၂၉
Cohen ကို JD, Braver TS, ဘရောင်း JW: prefrontal cortex အတွက် dopamine function ကိုအပေါ်တွက်ချက်အမြင်များ။ Curr Opin Neurobiol 2002; 12: 223-229
Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ, Hitzemann R, Logan J, Schlyer DJ, Dewey SL, Wolf AP: dopamine D2 receptor ရရှိနိုင်မှုလျော့နည်းခြင်းသည်ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Synapse 1993; 14: 169-177
ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်အဖြစ် Kaufman JN၊ Ross TJ, Stein EA, Garavan H: ။ J ကို Neurosci 2003; 23: 7839-7843
Volkow ND, Fowler JS: စွဲ၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်မောင်းနှင်မှုရောဂါ။ orbitofrontal cortex ပါ ၀ င်မှု။ Cereb Cortex 2000; 10: 318-325
Goldstein RZ, Volkow ND: မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် ၄ င်း၏နောက်ကွယ်မှ neurobiological အခြေခံ။ frontal cortex ပါ ၀ င်မှုအတွက် neuroimaging အထောက်အထား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2002; 159: 1642-1652
Graybiel AM: Basal ganglia နှင့်လှုပ်ရှားမှု repertoires ၏အတုံး။ Neurobiol Learn Mem 1998; 70: 119-136
Shidara M, Richmond BJ: anterior cingulate: ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ချက်၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ခုတည်းအာရုံခံအချက်ပြ။ သိပ္ပံ 2002; 296: 1709-1711
Foote SL, Morrison JH: cortical လုပ်ဆောင်ချက်၏ Extrathalamic မော်ဂျူလ်။ Annu ဗြာ Neurosci 1987; 10: 67-95
McFarland K, Lapish CC, Kalivas PW: နျူကလိယ၏အဓိကအတွင်းသို့ prefrontal အချိုမှုန့်ထုတ်လွှတ်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားကိုကင်း - သွေးဆောင်ခြင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည်။ J ကို Neurosci 2003; 23: 3531-3537
Kalivas PW - ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းစေသောအချိုမှုစနစ်များ။ Curr Opin Pharmacol 2004; ၄: ၂၃-၂၉
ရော်ဘင်ဆင်တီ၊ Berridge KC: မူးယစ်ဆေးစွဲလိုမှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာအခြေခံ - စွဲစွဲလမ်းမှုတစ်ခု၏မက်လုံး - အာရုံကိုသီအိုရီ။ Brain Res Brain Res Rev 1993၊ 18: 247-291
Kalivas PW, Stewart J: မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်မော်တာလှုပ်ရှားမှု၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစတင်ဖော်ပြခြင်းနှင့် Dopamine ဂီယာ။ Brain Res Brain Res Rev ၁၉၉၁; 1991: 16-223
Anagnostaras စင်ကာပူ၊ ရော်ဘင်ဆင် TE: အမ်ဖီတမင်း၏စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်သက်ရောက်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ Behav Neurosci 1996; 110: 1397-1414
Kalivas PW, Weber B: အမ်ဖီတမင်းဆေးသွင်းခြင်းကို ventral mesencephalon သို့အရံ amphetamine နှင့်ကိုကင်းများသို့အာရုံခံစေသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 1988; 245: 1095-1102
Vezina P, Stewart J: Amphetamine သည် ventral tegmental toရိယာကိုအုပ်ချုပ်သော်လည်းနျူကလိယသို့မဟုတ်ဘဲကြွက်များအားစနစ်တကျမော်ဖင်းအကိုက်သို့ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ Brain Res 1990; 516: 99-106
Dong Y၊ Saal: D၊ သောမတ်စ် M၊ Faust R, Bonci A၊ Robinson T, Malenka RC: dopamine အာရုံခံဆဲလ်များတွင် synaptic ခွန်အား၏ကိုကို - သွေးဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းအား - GluRA (- / -) ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA 2004; 101: 14282-14287
Pittenger C, Kandel ER: ကြာရှည်ခံနိုင်သောပလပ်စတစ်ဖြစ်သည့် aplysia နှင့် hippocampus အတွက်ယေဘုယျယန္တရားများကိုရှာဖွေသည်။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol Sci 2003; 358: 757-763
မာတင် SJ, Grimwood PD, မောရစ် RG: Synaptic ပလပ်စတစ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်: အယူအဆတစ်ခုအကဲဖြတ်။ Annu ဗြာ Neurosci 2000; 23: 649-711
Malenka RC: LTP ၏ရေရှည်အလားအလာ။ နတ်ဗြာ Neurosci 2003; 4: 923-926
သောမတ်စ် MJ, Malenka RC: mesolimbic dopamine စနစ်တွင် Synaptic plasticity ။ Philos Trans R Soc Soc B B Bi Sci 2003; 358: 815-819
Kauer JA - စွဲလမ်းစေသောသင်ကြားမှုယန္တရားများ - အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့် ventral tegmental inရိယာတွင် synaptic plasticity Annu ဗြာ Physiol 2004; 66: 447-475
Wolf ME၊ Mangiavacchi S, Sun X: dopamine receptor များသည် synaptic plasticity ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်ယန္တရားများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 2003; 1003: 241-249
Malinow R, Malenka RC: AMPA receptor trafficking and synaptic plasticity ။ Annu ဗြာ Neurosci 2002; 25: 103-126
Li Y, Kolb B, Robinson TE: နျူကလိယ၌အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုးများ၏သိပ်သည်းဆအတွက် persistent amphetamine- သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများ၏တည်နေရာ accumbens နှင့် caudate-putamen ။ Neuropsychopharmacology 2003; 28: 1082-1085
ရော်ဘင်ဆင်တီ၊ Kolb B - အမ်ဖီတမင်းနှင့်ကိုကင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုခံယူပြီးနောက်နူကလီးယပ်စ် accumbens နှင့် prefrontal cortex ရှိ dendrites နှင့် dendritic spines များ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲခြင်း။ Eur J ကို Neurosci 1999; 11: 1598-1604
မျှော်လင့် BT၊ Ny HE, Kelz MB၊ Self DW၊ Iadarola MJ၊ Nakabeppu Y၊ Duman RS, Nestler EJ - တာရှည်ခံ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော ဦး နှောက်တွင် ဦး နှောက်တွင်ပြောင်းလဲထားသော Fos ကဲ့သို့ပရိုတင်းများနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုများပါဝင်သည်။ ။ Neuron 1994; 13: 1235-1244
Berke JD, Paletzki RF, Aronson GJ, Hyman SE, Gerfen CR: dopaminergic ဆွအားဖြင့်သွေးဆောင် striatal ဗီဇစကားရပ်၏တစ် ဦး ကရှုပ်ထွေးသောအစီအစဉ်။ J ကို Neurosci 1998; 18: 5301-5310
Silva AJ, Kogan JH, Frankland PW, Kida S: CREB နှင့်မှတ်ဉာဏ်။ Annu ဗြာ Neurosci 1998; 21: 127-148
Lonze BE, Ginty DD: အာရုံကြောစနစ်အတွင်းရှိ CREB မိသားစုကူးယူခြင်းအချက်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်စည်းမျဉ်းများ။ Neuron 2002; 35: 605-623
Konradi C, Cole RL, Heckers S, Hyman SE: အမ်ဖီတမင်းသည်ကူးစက်သည့်အချက် CREB မှတဆင့်ကြွက် striatum တွင်မျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြမှုကိုထိန်းညှိသည်။ J ကို Neurosci 1994; 14: 5623-5634
Konradi C၊ Leveque JC, Hyman SE: Striatal အာရုံခံဆဲလ်တွင်အမ်ဖီတမင်းနှင့် dopamine သွေးဆောင်ချက်ချင်းမျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြချက်သည် postsynaptic NMDA receptors နှင့် calcium ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ J ကို Neurosci 1996; 16: 4231-4239
Steiner H, Gerfen CR: Dynorphin သည် striatum ရှိ D1 dopamine receptor-mediated တုံ့ပြန်မှုများကိုထိန်းညှိသည်။ dorsal နှင့် ventral striatum တွင် pre- နှင့် postsynaptic ယန္တရားများ၏ပြောင်းလဲမှုရှိသည့်အစောပိုင်းမျိုးဗီဇ induction ဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ J ကို Comp Neurol 1996; 376: 530-541
Hurd YL, Herkenham M: လူ့ကင်းစွဲသူများ၏ neostriatum တွင်မော်လီကျူးပြောင်းလဲခြင်း။ Synapse 1993; 13: 357-369
ကိုးလ် RL, Konradi ကို C, ဒေါက်ဂလပ် J ကို, Hyman SE: amphetamine နှင့် dopamine မှအာရုံကြောလိုက်လျောညီထွေ: ကြွက် striatum အတွက် prodynorphin ဗီဇစည်းမျဉ်း၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuron 1995; 14: 813-823
Spanagel R ကို, Herz A, Shippenberg TS: တက်ကြွစွာတက်ကြွ endogenous opioid စနစ်များကိုဆန့်ကျင် mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း modulate ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 1992; 89: 2046-2050
Carlezon WA Jr, Thome J, Olson VG, Lane-Ladd SB, Brodkin ES, Hiroi N, Duman RS, Neve RL, Nestler EJ: CREB မှကင်းဆုကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ သိပ္ပံ 1998; 282: 2272-2275
Spangler R, Ho A, Zhou Y, Maggos CE, Yuferov V, Kreek MJ: ကြွက် ဦး နှောက်တွင် kappa opioid receptor mRNA ၏စည်းမျဉ်းကို“ မူးယစ်” ပုံစံကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့် preprodynorphin mRNA နှင့်ဆက်စပ်မှုတို့ကထိန်းချုပ်သည်။ Brain Res Mol Brain Res ၁၉၉၆၊ 1996: 38-71
McClung, CA, Nestler EJ: CREB နှင့် deltaFosB တို့၏မျိုးဗီဇဖော်ပြချက်နှင့်ကိုကင်းဆုကိုစည်းမျဉ်းဥပဒေ။ Nat Neurosci 2003; 6: 1208-1215
Deroche-Gamonet V, Belin D, Piazza PV: ကြွက်များတွင်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ ၂၀၀၄; 2004: 305-1014
Vanderschuren LJ, Everitt BJ: မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းသည်ကိုကင်းမှကြာရှည်စွာမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းသည်မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ ၂၀၀၄; 2004: 305-1017